တစ်ဦးကလေဟာနယ်ပြွန်ကိုလည်းတစ်ဦးအီလက်ထရွန်ပြွန်ကိုခေါ်ပြွန်အတွင်း၌တံဆိပ်ခတ်သတ္တုလျှပ်အကြားအီလက်ထရွန်များ၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အီလက်ထရောနစ် circuitry များတွင်အသုံးပြုမယ့်တံဆိပ်ခတ်-ဖန်သို့မဟုတ်သတ္တု-ကြွေဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြွန်အတွင်းရှိလေထုကိုတစ်ဦးလေဟာနယ်ဖယ်ရှားသည်။ လေဟာနယ်ပြွန်, (DC ကမှ AC) လက်ရှိရေဒီယိုနှင့်ရေဒါများအတွက်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) ပါဝါ oscillating ၏မျိုးဆက်နှင့်ထို့ထက် ပို. ညွှန်ကြားဖို့ Alternative လက်ရှိတစ်ဦးအားနည်းလက်ရှိ, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၏ amplification များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
PV သိပ္ပံတူရိယာအဆိုအရ "ယင်းကဲ့သို့ပြွန်များ၏အစောဆုံးပုံစံများနှောင်းပိုင်း 17 ရာစုအတွင်းထင်ရှား၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လုံလောက်သောနည်းပညာထိုကဲ့သို့သောပြွန်များ၏ခေတ်မီဗားရှင်းထုတ်လုပ်ရန်တည်ရှိသော 1850 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီနည်းပညာကိုအကျိုးရှိစွာလေဟာနယ်ပန့်များ, အဆင့်မြင့်ဖန်မှုတ်ခြင်းနည်းစနစ်ပါဝင်သည် , ထို Ruhmkorff သော induction ကွိုင်။ "
လေဟာနယ်ပြွန်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်အီလက်ထရွန်းနစ်အတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်ကို၎င်း, cathode-Ray ပြွန်ပလာစမာ, LCD ကိုနှင့်အခြားနည်းပညာများအားဖြင့်လှညျ့ စား. နိုငျပါမခံရမီရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုမော်နီတာများအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
1875 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းကယ်ရီဟာ phototube တီထွင်ခဲ့သည်။
1878 ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်ဆာဝီလျံကောက်ကို 'ကောက်ပြွန်' ပု cathode-Ray ပြွန်တစ်ခုအစောပိုင်းရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
1895 ခုနှစ်, ဂျာမန်, Wilhelm Roengten အစောပိုင်းရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင် Xray ပြွန်။
1897 ခုနှစ်, ဂျာမန်, ကားလ်ဖာဒီနန် Braun တို့သည်ကိုတီထွင် cathode ray tube oscilloscope ။
1904 ခုနှစ်တွင်ဂျွန် Ambrose Fleming ကကို 'Fleming က Valve' 'ဟုခေါ်တွင်ပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့အီလက်ထရွန်ပြွန်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Leming လေဟာနယ်ပြွန် diode ကိုတီထွင်။
1906 ခုနှစ်, Lee ကက de သစ်တောအဆိုပါ Audion နောက်ပိုင်းတွင် '' Fleming က Valve '' ပြွန်တခုတခုအပေါ်မှာတိုးတက်မှုသည် triode ဟုခေါ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။
1913 ခုနှစ်တွင်ဝီလျံဃ Coolidge က 'Coolidge Tube' ပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ Xray ပြွန်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
1920 ခုနှစ်တွင် RCA ကိုပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်အီလက်ထရွန်ပြွန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။
1921 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အဲလ်ဘတ် Hull ကအဆိုပါမဂ္ဂနက်ထရွန်အီလက်ထရောနစ်လေဟာနယ်ပြွန်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
1922 ခုနှစ်, ဖီလို T. Farnsworth ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်ပထမဦးဆုံးပြွန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ system ကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
1923 ခုနှစ်တွင် ဗလာဒီမာ K သည် Zworykin အဆိုပါ iconoscope ဒါမှမဟုတ်တီထွင် cathode-Ray ပြွန် နှင့် kinescope ။
1926 ခုနှစ်, Hull နဲ့ Williams က Co-တီထွင်သည့် tetrode အီလက်ထရောနစ်လေဟာနယ်ပြွန်။
1938 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်လူမျိုးစယ်နှင့် Sigurd Varian အဆိုပါ klystron ပြွန် Co-တီထွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသမိုင်း Kleenex ၏တစ်ရှူး
အဆိုပါ Hula ကွင်း၏သမိုင်း
အဆိုပါ Charleston Dance ဆိုတာဘာလဲ
ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲ: မင်းသားဝီလျံဩဂုတ်, Cumberland ၏ Duke
10 ဂျပန်စကားအင်္ဂလိပ် Speakers လုံးမှား Get
အာဖရိကန်အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရှင် - H ကိုငါအ
Nevado Ojos del Salado - တောင်အမေရိကရဲ့ဒုတိယအချက်အမြင့်ဆုံးတောင်
မာကု၏အဆိုအရအဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်း, အခန်း 9
ကျောက်၌ Holes 11 အမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများများအတွက်အမည်များ
တစ်ဦး Monotype ပုံနှိပ်ပါ Make လုပ်နည်း
တရားမ္တွ & တန်းတူရေးအပေါ်တွင် Friedrich နစ်ရှေး
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ 101 - တစ်ဦးဘောလုံးဂိမ်းကစပြီး၏အခြေခံ
ဂျိမ်း Madison: သိသိသာသာအချက်အလက်နဲ့အကျဉ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ